Ama-Proteas abhekana nomsebenzi wokuqala ngaphambi kwe-season ematasa ekhaya
Ukuqala kuka-Faf du Plessis njengokapteni we-South Africa kuwona wonke ama-format kufika ngomdlalo wokuqala we-Sunfoil Test bedlala ne-Bangladesh ozoqala e-Senwes Park e-Potchefstroom ngoLwesine. Ukapteni uthi le-series ithuba lokuthi ama-Proteas ‘aqale kabusha’, njengoba ezohola kanye nomqeqeshi u-Ottis Gibson.
Ama-Proteas azodlala imidlalo eminingi ekhaya kule-season, kuzobe kufike i-Bangladesh, i-Zimbabwe, i-India ne-Australia okubalwa khona imidlalo yomhlaba engu-23 kuwona wonke ama-format. Okwamanje, inselelo ise-Potchefstroom, ezoba inkundla enhle kuma-Proteas kumdlalo we-Test wesibili kuphela kuyona inkundla.
“Inkundla enjena angeke ithole ikhilikithi eningi yama-Test ngoba ziningi izinkundla,” esho ekhuluma nezintatheli e-Senwes Park ngoLwesithathu. “Kuhle kwidolobha elincane elifana ne-Potch ukuthola i-Test, ngethemba abafundayo bazophuma futhi baseseke. Kumnandi ukuhambisa umdlalo emazweni, asinayo inkinga ngalokho.”
Ukapteni wama-Multiply Titans, u-Aiden Markram, kuhlelwe ukuthi abe umdlali wesi-97 wama-Test ukudlalela i-South Africa kusukela kwi-re-admission uma edlala no-Dean Elgar ngaphezulu. Lomdlali oneminyaka engu-22 ukhulile kwizinga lama-domestic kusukela ehola i-South Africa U19 ekunqobeni indebe yomhlaba ngo-2014, futhi une-average engu-44.33 emidlalweni engu-34 e-first class kanye namakhulu ayisithupha no-50 abangu-11.
“Kimina kubalulekile ukuthi angalaleli yonke into eshiwoyo ngaye,” u-Du Plessis ekhuluma ngomdlali omncane. “Kubalulekile ukuthi agxile ekutheni udlala omunye umdlalo, angene sengathi uyodlalela ama-Titans. Ayikho ingcindezi phezukwakhe, ngizozama ukuyisusa kuyena ukuze akhululeke futhi abe nenkululeko yokudlala. ”
Indawo lapho u-Du Plessis kanye nabanye abashayayo abafuna ukuyilungisa kusukela nge-season edlulile ukuqhubeka kahle emuva kokuqala kahle bathole amakhulu. u-Dean Elgar owathola ikhulu bedlala ne-England, okwaphoxa njengoba ukushaya kahle kukhona eqenjini.
“Njengeqembu elishayayo asiwahlanganisanga ama-runs ebesithanda ukuwathola,” esho evuma. “Besinzima isimo e-England, uma ukhuluma nomuntu ofana no-Alastair Cook owathi isimo besinzima kunalesi asijwayele e-England futhi sewadlala imidlalo embalwa lapha.”
“Isimo sasekhaya lesi, yilapha okumele sikhuphule amasokisi futhi sithole ama-runs,” esho eqhubeka. “Kubukeka kuye-wicket enhle yokushaya futhi bonke abadlali bami kahle. Kusize wonke umuntu ukuyodlala kwi-Sunfoil Series kulempelasonto, sikuphele isikhathi eside ukuthi abantu bakwazi ukudlala khona. Kuningi okuzuzwe abashayayo, wonke umuntu wathola ikhulu kanye nama-runs amakhulu azosimisa kahle ngaphambi kwemidlalo emibili yama-Test.”
i-Faf du Plessis uzohola ama-Proteas kuma-format amathathu Ama-Proteas azimisele ekugcineni irekhodi elincomekayo u-Du Plessis uthemba sengathi isimilo sika-Elgar singagqugquzela abanye abashayayo uDu Plessis uzophuthelwa iTest yokuqala ngenxa yomndeni AmaProteas ahlanganela umdlalo okumele awunqobe AmaProteas alindele iqembu lonke lidlale indima kumdlalo ozocacisa nge-series uDu Plessis uhola ngamazwi okubonga kwemidlalo engu-100 ka-Amla uDu Plessis ogqugquzelwe, udlale umdlalo oncomekayo uFaf du Plessis udlulisa isikhalazo ngesinqumo se-ICC match referee uFaf unamakhulu alandelanayo iTest eyidlula yonke kumsebenzi wami – uDu Plessis